Famonoana zandary : naiditra am-ponja ny ampanjaka | NewsMada
Famonoana zandary : naiditra am-ponja ny ampanjaka
Nidoboka am-ponja ao Fianarantsoa, ny faran’ny herinandro teo ny ampanjaka iray sy ny ben’ny Tanàna ny kaominina ambanivohitr’i Namorona, voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny famonoana ny GP2C Fanambina Marcellin. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary ao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava ao Fianarantsoa, nisy olona 12 hafa naiditra am-ponja niaraka amin’ilay Ampanjaka sy ny ben’ny Tanàna raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny ampanjaka iray sy ny zanaky ny ben’ny Tanàna.
Tsiahivina fa tonga nanao pimaso tamin’ny Ampanjaka tany Farafangana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ireny fotoana nisian’ny fitsaram-bahoaka nahafaty zandary ireny. Voalaza anefa fa ny ampanjaka sy ny ben’ny Tanàna mihitsy no nitaona ireo olona tao Namorona hanao fitsaram-bahoaka tamin’ilay zandary. Raha tena nandaitra ny pimaso nataon’ny filoha Rajaonarimampianina, mety tsy ho sahy nampiditra am-ponja azy ireo ny eo anivon’ny fitsarana? Nandray fanapahan-kevitra araka ny tokony ho izy ny fitsarana sa noho ny tahotra? Tsy nanaiky rahateo koa ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa tsy maintsy samborina ireo tompon’antoka sy nahavanon-doza tamin’ny famonoana ny chef de poste, Fanambina.